PELLONIA: SAWIR, SHARAX, DARYEELKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Beautiful Pellionia xayeysiis: sawiro iyo talooyin ku saabsan daryeelka guriga
Pellonia waa dilka ah Suufiyo hooska, waraabinta nidaamsan. Jawaabta ugu fiican ee bacriminta.
Waxay ku kori kartaa koriyo, beeraha ubaxyada iyo jardiinooyinka botanical.
Tilmaameeyaha hoose nettle. Laakiin ka duwan udgoon, waa dhib la'aan. Dabayshu ma gubto. Waa wakhti badan.
Waxay ku koraan qaabka geedaha ama dhirta ornamental cagaaran. Maqaarka uumi.
Leaves qaababka iyo qiyaasaha kala duwan. Dhinaca geesaha waxaa lagu dhajin karaa dhirbaaxo yaryar ama gabi ahaanba hal cutub ah.
Ubaxa waa mid aad u qaro weyn Isku-xidhan yihiin xarig ama dallad-qaabeeya. Waxaa jira qiyaastii 50 qaybood oo kala duwan.
Ugu horreyntii, dhirtaas waxay ku korodhay Aasiya oo ku taal xeebta Pacific. Warshadda waxaa loo isticmaalaa sida daboolka dhulka, oo ah qaab cawska yar ama sida dillaac.
Sawirrada Pellionia oo guri ku leh:
Ka dib iibsashada geedka dhaqday tuubada biyaha. Ka dibna lagu beddelaa awood kale oo bilaash ah. Ubax wuxuu u kori karaa sida daboolo dhir ama ampelous. Daboolka ayaa ku qoran miisaska kafeega, nalalka daaqadda.
Ampelnaya - waxay ku kori kartaa dheriyo, armaajooyin, buug-gacmeedka. Waxaa loo oggol yahay in uu koro dhuumaha. Inta badan dhirta waxaa laga heli karaa florariums, beero, ubaxyo ubax. Warshadu waxay u muuqataa qurux badan ama ku hareereysan ubaxyo kale.
Mararka qaarkood waad kala jajabin kartaa dusha sare. Thanks to nidaamkaan, dadka guryaha degan lama tegi doono, laakiin dhinaca kale. Dhismo ballaaran oo faafin ayaa la sameeyaa.
Gooyo afkoda ayaa loo isticmaali karaa taranka. Sidaa darteed, manjooyin waxaa la fuliyaa guga ka dib baraaruga dhirta laga bilaabo xilliga nasashada.
Waraabinta waa inay noqotaa mid nidaamsan oo joogto ah. Ha u oggolaan in dhoobo dhoobo ah inay qalajiso. Iyadoo la'aanta qoyaan, ubaxu wuu dhiman karaa.
Xulashada ugu fiican ee waraabka waa qalajinta yar ee qaybta sare ee dhulka.
Mararka qaarkood ubaxa waa la buufinayaa biyaha laga bilaabo sprayer.
Tan iyo nidaamka xididka dhirta waa yar yahay, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo weelasha gacmaha iyo weelka. Dabadeed Pellionia waxay noqon kartaa dhulka. Xaaladdan, ayaa u muuqda quruxda "roogga". Haddii nidaamka xididku yahay kan ugu weyn oo aan loo isticmaali karin dusha sare - xayawaanka waxaa lagu beeray weel qoto dheer. Waxaad isticmaali kartaa dheriyo, boorar ama balaashyo alwaax ah.
Beeridda xajmiga ayaa u oggolaanaysa dhirta inay ku koraan dheriyo. Xaaladdan, ubaxa waxaa la dhigayaa oo kaliya hoosta isha dabeecadda. Markaas waxaa la arki doonaa ma aha dhinaca badaha ee caleemaha, laakiin mid hore. Qeyb ka mid ah taangiga waa in laga buuxiyaa nidaam dheecaan leh. Meelaha qumman ama dhoobo leh.
Ceelasha yaryar waxaa laga sameeyaa meesha ugu hooseysa taangiga. Dhulka jiifa. Cuntada ayaa xaruntan ku taal. Daadi carrada. Badanaa waa la waraabiyaa.
Wakiilka Tani waxay si fiican u koraan carrada nafaqada leh. Waxaad isticmaali kartaa iibsashada dhulka ubaxyada guriga ama si aad u diyaariso substrate-ka. Tani waxay u baahan doontaa dhul compost ah oo lagu qasi karo ciidda aqalka dhirta lagu koriyo. Humus iyo ciidda badda ee aad u ba'an ayaa lagu daraa.
Waa lagama maarmaan in lagu daro peat dhulka, taniyo Pellionia wuxuu jecel yahay jawi nafaqo leh.
Haddii peat uu ku jiro tiro yar ama aan lagu darin dhammaan - geedaha qurxinta ayaa aad u xun inay koraan. Waxaa suurtagal ah dhimasho. Kala beddel garoobka dhirta sida kartida buuxda ee nidaamka xididka. Qalab ku-tallaaliddu waxay isticmaalaan awood weyn.
Geedka wuxuu u baahan yahay nidaam quudin-la'aan. Waxaad quudin kartaa ubax bil walba. Xilliga jiilaalka, quudinta ayaa la joojinayaa. Alaab wanaagsan oo la iibsaday ubaxyada ubaxyada.
Fiirinta waxaa lagu qasi karaa 2-3 jeer ka hooseeya inta lagu xusay calaamadda. Haddii kale, geedka waxaa la gubi karaa. Iyada oo ay sabab u tahay bay'ada asiidhka ah ee geedaha ornamental koraya, waxyeello kiimiko ah oo aan loo baahnayn ayaa dhici karta.
Ha u oggolaan inay xiriir toos ah la leh xididdada dhirta.
Ubaxa ma jecla kulaylka xad-dhaafka ah. Heerkulka wanaagsan ee xilliga qaboobaha wuxuu ku kala duwanaan karaa inta u dhaxaysa 17-19 ° C. Xayawaanku ma jecla dhibco xoog leh.
Waad ka dhigi kartaa wakiilkan jilibka ah meel u dhow batteriyada kulul. Iyada oo hawo kulul qalalan, dhirta si deg deg ah u lumiso saamaynta qurxinta. Caleemaha waxay bilaabaan inay huruud noqdaan oo ay dhacaan.
Burburkii ornamental si wanaagsan ayuu u koraa ee qoto dheer qolka laydhka ah. Waxaa lagu dhejin karaa siyaabaha, miisaska, buugaagta. Laakiin markaad meel dhigaysid waxaad u baahan tahay inaad ogaato hooska
Waa mamnuuc inaad ubaxdo daaqadaha daaqadaha leh daaqadaha furan. Waxay ka jawaabtaa si xun u diridda qorraxda.
Qorraxdu way gubataa geedka, ka dib marka dhibco madow muuqanayaan iyo geedka joogsadaa si ay u koraan. Xilliga jiilaalka, sababtoo ah iftiin la'aan, ubaxa waxaa loo wareejin karaa daaqada. Nalalka dheeriga ah ee dabiiciga ah looma baahna.
Isticmaalidda isticmaalka sare ee asliga ah. Waa muhiim in wax laga beerto ugu yaraan saddex internode ah. Gooynta biyaha ku jira ama substrate qoyan ilaa nidaamka xididka. Ka dibna lagu beeray ciidda. Ku dabool cinjirka ama foolka dhalada. Wakhti ahaan dibadda u soo bax. Ka dib markii la buuxa rooting - transplanted in weelasha waaweyn.
Ka dib markii ubax, waxaad soo ururin kartaa abuurka. Waxay faa'iido u leeyihiin beerashada dhirta cusub. Seeds lagu hayo korriin koraya. Ka dib markii nidaamkan, biqilka waxay kordhayaan. Diyaarso weelasha qotoda dheer.
Waxyaalaha beeritaanka noocan ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu beero habka daadinta. Markaas carrada waxaa lagu buufin karaa falejo iyo daboolay dhalo caag ah oo la gooyey. Goobo ahaan geedo mustaqbalka ah ayaa hawo qaadaya. Ka dib markii sprouts muuqan ugu yaraan 3-4 caleemo - waa la wareeri karaa.
Pelonia waa mid weyn nadiifiya hawada, waxay u kuur gareeysaa phytoncides. Wuxuu dilaa microbeska iyo murgaasiyada. Wuxuu qabaa jawiga qolka.
Mararka qaarkood geedaha qurxinta waxaa loo isticmaalaa karinta. Maraqa kariimka, ku dar barsak, saladh.
Laakiin warshadda waa in aan loo isticmaalin dadka qaba cudurrada mindhicirrada, calool-xanuunka iyo boogta.
Waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan aphids iyo whiteflies.
Wixii ka hortag ah geedaha ornamental ku buufiyey iyada oo biyo socda diiran. Intaas ka hor waxaa lagama maarmaan ah in la xidho xididada bac ah. Whiteflies waxay u egyihiin sida manka. Calaamadaha ugu horreeya ee boogta, hababka kumbiyuutarka ayaa loo isticmaalaa. Wanaag ku haboon mukhaadaraadka "Pegasus", "Aktara", "Konfidor", "Fitoverm", "Arrivo".
Haddii aphids cudurku ku dhaco, meelaha la qabadsiiyay ayaa la saarayaa. Warshadda waxaa lagu daaweeyaa saliid. Waxaad isticmaali kartaa daawooyinka sunta ah. Ka dib markii processing, geedka waa in lagu daboolaa filim yar.
Haddii uu geedka joojiyo inuu ubaxsado ama koro, markaa xaaladaha sii kordhaya ayaa la jabiyaa.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in dhirta ay hooska-jecel yahay, sababta ugu weyn waxay noqon kartaa iftiin aad u dhalaalaya. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la yareeyo ama la kordhiyo waraabinta, ka saar ubaxa ka soo daata kuleyliyaha ama beerista beerta xayawaanka ah ee isku dhafan.
Pellonia waa xayawaan. Leaves of baadiyaha foomka kala duwan iyo size. Kordhay abuur iyo geedo. Ma jecla is-bedelka joogtada ah. Waxay si fiican u koraan hooska. Wuxuu diyaariyaa dhar wanaagsan, qolal xasilloon iyo daaweyn joogto ah oo laga soocayo faleebada.